3D Printing Service / Instant 3D Printing Quote / Order 3D Mbipụta - Createproto Tech Co., Ltd.
Ọrụ / 3D Printing
Ndị ọkachamara na-arụ ọrụ 3D na-arụ ọrụ ngwa ngwa, ma ọ bụ ezigbo SLA 3D mbipụta ma ọ bụ mbipụta 3D SLS na-adịgide adịgide, ị nwere ike ịmatacha imewe gị n'enweghị mgbochi ọ bụla.
Abamuru nke 3D Printing
Mbelata Oge Mbuga Oge - A ga-ebufe akụkụ n'ime ụbọchị ole na ole, na-agba ọsọ ngwa ngwa na oge ịre ahịa.
Wuo Geometry Complex - Na-enye ohere ịmepụta akụkụ ndị pụrụ iche na jiometrị dị mgbagwoju anya na nkọwa zuru oke na-enweghị ụba ụgwọ.
Belata Nrụpụta Nrụpụta - Mbanye iji belata ụgwọ mmepụta site na iwepu mkpa ngwaọrụ na belata ọrụ.
Gịnị Bụ 3D Printing Prototype?
3D Printing bụ a sara mbara okwu na-akọwa mmako n'ichepụta, nke na-agụnye a usoro nke ngwangwa prototyping teknụzụ na ikpokọta otutu n'ígwé nke ihe ike akụkụ.
Ntughari ngwa ngwa nke 3D bu uzo ngwangwa, odi nfe ma nwe onu ego iji gbanwee echiche di uku n’ime ahia. Ihe ngosi 3D a na-ebipụta ọ bụghị naanị na-enyere aka inyocha njirimara ahụ kamakwa ọ na-achọta okwu n'oge na mmepe usoro yana nzaghachi ozugbo na ndozi nhazi, na-egbochi mgbanwe dị oke ọnụ ozugbo ngwaahịa ahụ nọ na mmepụta zuru oke.
Gini mere iji choputa Createproto maka 3D Printing Service?
Createproto bụ ọkachamara n'ọhịa nke ngwa ngwa na -emepụta ngwa ngwa na China, na-enye ọtụtụ ụdị mbipụta 3D, gụnyere SLA 3D mbipụta (Stereolithography), mbipụta 3D SLS (Nhọrọ Laser Sintering).
Na Createproto Anyị nwere ndị otu zuru ezu nke ndị injinia raara onwe ha nye na ndị njikwa ọrụ ga-eso gị rụọ ọrụ iji nyochaa njirimara CAD gị, ọrụ ngwaahịa gị, nnabata akụkụ, wdg. Anyị na-agbasi mbọ ike iji nweta oge niile akọwapụtara iji wepụta ngwaahịa na nkwa dị mma nye ndị ahịa anyị n'ụwa niile na ọnụ ahịa ọnụ.
Gịnị bụ SLA 3D Printing?
SLA 3D Printing (Stereolithography) na-eji laser ultraviolet nke na-adọta n'elu mmiri resin thermoset iji mepụta ọtụtụ puku mpempe akwụkwọ ruo mgbe etinyere akụkụ ikpeazụ. A dịgasị iche iche nke ihe, oke elu atụmatụ atụmatụ, na àgwà n'elu imecha omume na SLA 3D Printing.
Olee otu SLA 3D Printing Work?
Nhazi data, Ihe Nlere 3D abata n'ime mmemme slicing nke sọftụwia nwere nke ọma, yana usoro nkwado dị ka ọ dị mkpa.
A na-eziga faịlụ STL ka ibipụta na igwe SLA, na tank jupụtara na resin photosensitive resin.
A na-agbada ikpo okwu ụlọ n'ime tank. UV laser doo anya site na lens enyochakwa ngwe nke cross-ngalaba tinyere Liquid elu.
Resin dị na mpaghara nyocha ahụ na-eme ka ọ sie ike ngwa ngwa iji mepụta otu ngwakọta nke ihe. Ozugbo emechara oyi akwa mbụ ka a na-agbadata ikpo okwu site na 0.05-0.15mm na akwa oyi akwa nke resin na-ekpuchi elu ụlọ.
A na-achọpụtazi oyi akwa na-esote, na-agwọ ma na-ejikọta resin na oyi akwa dị n'okpuru. Mgbe ahụ, megharịa usoro a ruo mgbe a wuru akụkụ ahụ.
Gịnị Bụ SLS 3D Printing?
SLS 3D Printing (Stereo Laser Sintering) na-eji nnukwu ike optic laser nke na-eme ka obere ntụ ntụ dị obere site na oyi akwa iji mepụta akụkụ geometric dị mgbagwoju anya. Mpempe akwụkwọ SLS 3D na-ewuli akụkụ ndị siri ike na ihe ndị jupụtara naịlọn, ndị kwesịrị ekwesị maka ụdị ọrụ arụmọrụ na akụkụ njedebe.
Olee otu SLS 3D Printing Work?
A na-achụsasị ntụ ntụ n'ime akwa oyi akwa n'elu ikpo okwu n'ime ime ụlọ ahụ.
Mgbe a na-ewe iwe dị ọkụ n'okpuru okpomọkụ nke polymer, ụdọ laser na-enyocha ntụ ntụ dịka akụkụ akụkụ akụkụ nke oyi akwa ahụ si dị ike. Ngwurugwu a na-atụghị edozi na-akwado oghere na cantilever nke ihe nlereanya ahụ.
Mgbe etinyere ibe ya n’elu akụkụ ya, ọkpụrụkpụ nke ikpo okwu na-ebelata site na otu akwa, na ịghagharị ihe na-agbasa a ntụ nke uniformly oké ntụ na ya maka sintering nke a ọhụrụ cross-ngalaba.
A na-emegharị usoro a ruo mgbe etinyere ọkwa niile iji nweta ihe nlereanya ahụ siri ike.
Uru nke SLA 3D Mbipụta
Lower oyi akwa ọkpụrụkpụ na elu ziri ezi.
Ihe mgbagwoju anya na nkọwa zuru oke.
Oke ire ụtọ na post-nhazi nhọrọ.
Nhọrọ nhọrọ nke ihe onwunwe dị iche iche.
Ngwa nke SLA 3D Printing
Ihe ngosi Ngosi.
Prototyping Clear Akụkụ.
Master ternkpụrụ maka Silicone Nkedo.
Uru nke SLS 3D Printing
Injin thermoplastics nke injinịa (naịlọn, GF naịlọn).
Njirimara ihe eji arụ ọrụ nke ọma na njikọta oyi akwa.
Enweghi usoro nkwado, na-enyere geometries dị mgbagwoju anya.
Nguzogide okpomọkụ, nguzogide kemịkal, nguzogide abrasion.
Ngwa nke SLS 3D Printing
Prototypes na-arụ ọrụ.
Ngalaba Ule Injinia.
End-eji Production Parts.
Ihe mgbagwoju anya, ihe ntanye, ihe eji ebi ndu.
Tulee ikike ndi na-eso SLA na SLS ka ha hota oru ndi 3D ziri ezi
SLS 3D mbipụta bụ ọgaranya ihe na ike mere nke plastic, metal, seramiiki, ma ọ bụ iko powders na ezi arụmọrụ. Mepụta igwe na-emepụta ihe nwere ike iwepụta ọcha naịlọn-12 PA650, PA 625-MF (Njupụta jupụtara) ma ọ bụ PA615-GF (Glass Jupụta). Agbanyeghị, mbipụta SLA 3D nwere ike ịbụ naanị ihe polymeri na-eme foto, ma arụmọrụ ya adịghị mma dị ka plastik thermoplastic.
Elu nke ihe nnwale site na mbipụta SLS 3D dị larịị ma sie ike, ebe mbipụta SLA 3D na-enye nkọwa dị elu iji mee ka akụkụ ahụ dị nro na nkọwa doro anya.
Akụkụ Izi ezi
Maka mbipụta SLA 3D, Obere Mgbapu Obere = 0.02 ”(0.5mm); Ndidi = ± 0.006 "(0.15mm) na ± 0.002" (0.05mm).
Maka mbipụta 3D nke SLS, Obere Mpepu Mgbidi = 0.04 ”(1.0mm); Ndidi = ± 0.008 "(0.20mm) na ± 0.004" (0.10mm).
Mpempe akwụkwọ SLA 3D nwere ike iwuli elu dị elu site na iji mpempe akwụkwọ laser dị mma na mpempe akwụkwọ kachasị mma iji melite nkọwa na izi ezi.
Mechanical nhazi Performance
Mpempe akwụkwọ SLS 3D na-eji ihe akụrụngwa iji mepụta akụkụ nwere ezigbo ngwa ọrụ. A na-ahazi SLS n'ụzọ dị mfe karị, ọ nwere ike ịdị nfe, igwu ala, na ịme ọpịpị ka ọ na-arụ ọrụ SLA 3D ibipụta akwụkwọ kwesịrị iji nlezianya mee ma ọ bụrụ na akụkụ ahụ agbaji.
Iguzogide Gburugburu Ebe Obibi
Nguzogide nke ihe eji ebi ihe SLS 3d na gburugburu ebe obibi (okpomoku, iru mmiri, na corrosion chemical) di ka nke ihe thermoplastic; Ihe ngosi SLA nke 3D na-emetụta mmiri na mbuze kemịkal, na karịa 38 'gburugburu, ha ga-adị nro na nrụrụ.
Ihe nkedo ederede nke 3D nke SLS ka nma karie nke SLA 3D, nke enwere otutu uzo n'elu uzo SLS nke n'enye aka na ntinye viscose.
Mpempe akwụkwọ 3D 3D dabara adaba maka mmeputakwa nke nna ukwu prototype, n'ihi na o nwere ihu dị mma, ezi nguzo dị mma na njirimara dị mma.
Subtractive & Mgbakwunye Manufacturing
3D ebi akwụkwọ na-mara dị mmako n'ichepụta, nke na-ewuli akụkụ site n'ígwé nke ihe. Ọ nwere ọtụtụ uru karịa usoro nhazi ọdịnala mana ọ nwere nsogbu ya. CNC machining bụ pụtara nkịtị subtractive Usoro eji maka akụkụ n'ichepụta, nke na-emepụta akụkụ site igbupụ oghere.
Akụrụngwa & Nnweta
3D ebi akwụkwọ usoro na-agụnye akụkụ a kere oyi akwa site na oyi akwa iji ihe ndị dị ka mmiri mmiri photopolymer resins (SLA), tụlee nke photopolymer (PolyJet), plastic ma ọ bụ metal powders (SLS / DMLS), na plastic filaments (FDM). N'ihi ya, ọ na-amịpụta obere mkpofu tụnyere CNC usoro. CNC machining bụ bee si a dum mpempe ihe, otú ahụ ka itinye n'ọrụ ọnụego nke ihe onwunwe bụ dịtụ ala. Ihe dị na ya bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile nwere ike ịbụ CNC, gụnyere mmepụta ọkwa plastik na ihe dị iche iche igwe. Nke a pụtara na ịkpụzi CNC nwere ike ịbụ usoro kachasị dị irè maka ụdị ihe eji eme ihe na njedebe na-ewepụta ihe ndị na-achọ ọrụ dị elu na arụmọrụ pụrụ iche.
Ezigbo, Ogologo Mkpa & Ọdịdị Geometric
3D ebi akwụkwọ nwere ike ịmepụta akụkụ na ukwuu mgbagwoju geometries ọbụna oghere udi na-apụghị ime site CNC machining, dị ka ọla, crafts, wdg CNC machining awade ukwuu akụkụ ziri ezi (± 0.005mm) na ọtụtụ mma elu kwuchara (Ra 0.1μm). Igwe ihe igwe CNC nke dị elu 5-axis nwere ike ịrụ ọrụ dị oke mkpa nke akụkụ ndị dị mgbagwoju anya nke ga-enyere gị aka imeri nsogbu ịma aka gị kacha sie ike.
Ọnụ ego, oke na nnyefe oge
3D ebi akwụkwọ a na-arụpụta ala obere nke akụkụ na-enweghị tooling, na-enweghị mmadụ aka, nke mere na ngwa ngwa mgbanwe na ala na-eri ga-ekwe omume. Ọnụahịa nrụpụta nke mbipụta 3D bụ ọnụahịa dabere na ọnụọgụ nke ihe, nke pụtara na akụkụ buru ibu ma ọ bụ karịa buru ibu na-eri ihe. Usoro nke ịkpụzi CNC dị mgbagwoju anya, ọ chọrọ ndị injinia a zụrụ azụ ka hazie usoro nhazi na ụzọ nhazi nke akụkụ, wee rụọ ọrụ dịka mmemme ahụ. Ya mere, a na-ekwu ụgwọ nrụpụta ihe na-etinye ọrụ ndị ọzọ n'ọrụ. Otú ọ dị, igwe CNC nwere ike ịga n'ihu na-enweghị nchịkwa mmadụ, na-eme ka ọ bụrụ nke zuru oke maka nnukwu mpịakọta.
Otito Prototyping na Manufacturing, CNC Prototyping, Fast Prototyping, Otito Prototyping, CNC Rapid Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services,